Lalao Olympika – Kitra: hiaro an’i Afrika i Egypta sy i Côte d’Ivoire - ewa.mg
News - Lalao Olympika – Kitra: hiaro an’i Afrika i Egypta sy i Côte d’Ivoire
Anisan’ny lalao hifantohan’ny
mason’ny rehetra ihany koa, amin’ity asabotsy ity, ny lalao
ampahefa-dalana, taranja baolina kitra sokajy lehilahy eo amin’ny
lalao Olympika, tanterahina any Japon. Anisan’ireo firenena
afrikanina tafakatra amin’izany ny Faraonan’i Egypta sy ny
Elefantan’i Côte d’Ivoire. Hifanehatra amin’ny La Furia Roja-n’i
Espaina ny Ivoarianina, fihaonana hotanterahina ao amin’ny kianja
Miyagi ao Rifu, manomboka amin’ny11 ora antoandro eto Madagasikara.
Amin’ny 12 ora no hifanandrina ao Kashima, i Japon, mpampiantrano
sy i Nouvelle-Zelande.
Amin’ny 1 ora folakandro ny
lalaon’i Brezila sy i Egypta ao amin’ny kianja Saitama. Lalao tena
andrasan’ny rehetra. Amin’ny 2 ora ao Yokohama ny an’ny Koreanina
atsimo sy i Meksika
L’article Lalao Olympika – Kitra: hiaro an’i Afrika i Egypta sy i Côte d’Ivoire a été récupéré chez Newsmada.
Sarotra ny fandidiana. Indrindra ho an’ny olona tsy dia maharaka ny fiainam-pirenena sy ny vaovao mifamahofaho amin’izao fotoana izao. Mafampana ny toe-draharaha, sa misy mandrehitra afo mitsitokotoko? Raha henoina tokoa aloha ny fanehoan-kevitry ny « miara-manonja » sy ny « tambatra », dia tena fanina tanteraka izay tsy maharaka. Ny an’iza no marina? Ny an’iza no arahina ? Fa angaha moa tsy fampahalalam-baovao, izany hoe natao hamaliana ireo mety ho fanontaniana hapetraky ny tsirairay ny mivoaka amin’izy ireny? Izany hoe ihany, fa mahavery hevitra ny maro ihany koa ity toa terana tsy maintsy mirona atsy na aroa ity. Izay tsy volomboasary izany, dia tsy maintsy ho mena? Izay tsy miandany amin’ny fitondrana dia tsy maintsy mpanohitra? Raha vao misalasala izany dia mpamadika? Satria tokoa, izany ny zava-misy eny anivon’ny fiarahamonina eny. Mifandramatra ny mpianakavy. Mifandrafy ny mpiray karan-doha. Noho ny fironana ara-politika ihany anefa izany… Tsy vao izao io no nisy fa nihamafy indray tato anatin’ny herinandro vitsivitsy izay. Tsy mahagaga loatra satria raikitra indray ny fikopahana afo mba hirehetan’ny krizy. Milaza ho eny Soamandrakizay ny mpanohitra. Efa tsy tatitra intsony fa hetsi-bahoaka mihitsy no harangarangan’izy ireo. Nialoha izany anefa, tao ambadiky ny radio ihany no nandrenesana ireo mpitarika, fa tsy nisy tazana na teny Analakely na teny Ambohijatovo. Mampirisika fotsiny dia miandry kendry tohina? May volon-tratra noho izany koa ny fitondrana, izay tsy maintsy mitandro fatratra ny tsy hisian’ny krizy manaraka. Mamaly avy hatrany raha vao mahazo kiana. Miatrana vao maheno ambanambana. Zaran’ny mpanohitra aza, satria sarotin-kitika ka hataony isak’izay mahatsiaro. Fa eo anelanelan’izany, misy olona marobe tsy te hierika krizy intsony. Mety tsy mpomba izy, fa tsy mpanohitra ihany koa. Aleo tsy hatao hoe vahoaka, satria samy milaza fa miaraka amin’ny vahoaka avokoa ny mpanao politika. Fa ireo olona marobe ireo, tsy mbola mikatom-pery tamin’ny krizy taloha. Mbola norarafan’ny krizy nateraky ny valanaretina ary mbola miady mafy isan’andro. Avelao izy hiaina tsotra…Zo ny Aina RandriatsiresyL’article Tsy maintsy mitambatra sy miara-mirona ve ? a été récupéré chez Newsmada.
Gazety TRIATRA: anton’ny hanohananao an’i Marc Ravalomanana Hary Andrianarivo: Mila averina amin’ ny laoniny ny filaminana eto Madagasikara, indrindra ny fifampifehezana, izay no antony nanohananay an’i Marc Ravalomanana. Mila olona to teny mahafehy ny manodidina azy, indrindra ny fanafoanana ny kolikoly mambotry ny firenena, izay manjaka amin’ izao fotoana izao. Tokony hamafisina ny fifehezana ireo tompon’andraikitra maro isan-tsokajiny eto amin’ ny firenena, ka i Ravalomanana Marc no efa hita fa mahafehy izany. Maro ireo fepetra efa napetrakay tany am-boalohany, ary tao anatin’ ny fifandresen-dahatra, hita fa nahafeno ny fepetra takianay i Marc Ravalomanana. Gazety TRIATRA: fahitanareo avy any Atsimon’ny Nosy ny resaka halatr’omby Hary Andrianarivo : Antony mahatonga tsy fandriam-pahalemana amin’ izao fotoana ny fisian’ ireo dahalo ambony latabatra, izay tsy vakin’ ireo mpitondra nifanesy loha hoy ity solombavambahoaka lany tao Ambositra ity , ka ny olona tahaka an-dRavalomanana Marc no ilaina noho izy tsy manana hena-maso, na amin’ny olona manodidina azy aza. Ahafahana manafoana ny halatr’omby amin’ izao fotoana, ny fisamborana ireo dahalo ambony latabatra, ka olona tsy manana hena-maso tahaka an-dRavalomanana Marc no hany mahavita izany. Fantatry ny rehetra rahateo fa na olona akaiky azy aza no manao ny tsy mety dia raisiny ny andraikitra. Noho izany tsy vahaolana ny “drone” fa ny fisamborana ny dahalo ambony latabatra ihany no ahafahana manafoana ny halatr’omby, sy ny famonoana ary fametavetana zaza amam-behivavy ataon’ ny dahalo. Gazety TRIATRA : Nandritra ny fanambarana nataonao sy ireo depiote tao amin’ ny antenimieram-pirenena, marina ve ny fisian’ilay lalàna mikasika ny fanekena ny fanambadian’ ny olona mitovy fananahana Hary Andrianarivo : Amin’ ny maha olom-piangonana ahy izay tsy manaiky ny fanambadian’ ny olona mitovy fananahana, dia Ravalomanana ihany no afaka manafoana sy manakana ny fandaniana sy fampakarana io lalàna io eny amin’ ny antenimieram-pirenena. Efa an-dalana mantsy ny fampakarana io lalàna io raha ny resaka sy ny vaovao heno, ka mila tohanana amin’ ny fampandaniana ny filoha Ravalomanana Marc izany. Sarotiny loatra izahay avy amin’ ny fiangonana loteranina manoloana ny fanarahana be fahatany ny fanao ratsin’ny vahiny, satria hamotika antsika izany. Ady atrehin’ny fiangonana ny tsy fanekena ny fanambadian’ny olona mitovy fananahana, ka kandidà tsy baikon’ny any ivelany no ilaina amin’ izany dia ny laharana faha-25. Gazety TRIATRA : Tsy mankato ny fanohananao an’i Marc Ravalomanana tokoa ve ny Amontana telo Hary Andrianarivo: Hararaotin’ny olona entina hampiadiana ny fianakaviamben’ny Amontana telo tokoa ny resaka fanagadran’i Ravalomanana an’i tantely Andrianarivo, taorian’ ny fanambarana nataoko mikasika ny fanohanako an’i Marc Ravalomanana. Any amin’ ny tambajotran-tserasera no tena ahitana izany, ary betsaka ny vaovao tsy mitombina. Manaiky tokoa aho fa nogadrain- Ravalomanana Marc i Tantely Andrianarivo, saingy na ity farany aza tsy miresaka izany intsony, satria ny fihavanana no jerena ary ny tombontsoam-pirenena. Ny fianakaviana rahateo efa nifampiresaka hatrizay, ary nanaiky fa tsy hijery ankoatra ny mahasoa ny Malagasy. Raha fifandrafiana foana no atao an-doha, hatramin’ izao isika tokony hankahala sy tsy hiara-hiasa amin’ny Frantsay noho ny famonoana ny mpiray tanindrazana tamin’ ny andron’ny fanjanahana. Ny Frantsay sy ny Alemana maninona niady nifamono, nefa amin’ izao fotoana dia samy miady ho an’ ny tombontsoan’i Eoraopa. Gazety TRIATRA : Fombanareo avy ao amin’ ny faritanin’i Fianarantsoa ve ny mivadibadika Hary Andrianarivo: Samy manana ny fomba nitaizana azy ny tsirairay, ary samy manana ny fomba fanaony. Tsy tokony hatao anaty kitapo iray noho izany ny rehetra, raha misy iray maningana. Iratra Raitra L’article Hary Andrianarivo manohana ny K25 : Mila averina ny fifampifehezana est apparu en premier sur .L’article Hary Andrianarivo manohana ny K25 : Mila averina ny fifampifehezana a été récupéré chez Triatra.
Fakafaka: be hambo ratsy !
Io hambo diso toerana io sy izay iray tarika aminy no mahatonga ny kolontsaina sy ny zavakanto malagasy hifotetaka amin’ny tany ! Ambony kokoa, hono, ny olona miteny vahiny. Roboka mampianatra ny zanany any amin’ny sekoly miteny sy mampiasa ny teny vahiny ny ray aman-dreny. Zavamaneno fitendrin’ny olona ambony sy mihaja eo amin’ny fiarahamonina, hono, ny « piano » sy ny « violon », andao hampianarina an’ireny ny ankizy. Ampahany kely dia kely amin’ny tranga tazana sy iainana ao anatin’ny fiarahamonina malagasy amin’izao fotoana ireo… Misy maha marina azy, angamba, raha ny endrika ivelany !… Saingy, toa hambo ratsy mitarika tsikelikely any amin’ny fahaverezan’ny maha izy ny Malagasy raha zohina miandalana. Anisan’izany ny fiheveran-tena ho tsy Malagasy intsony. Menatra ny hotondroina ho Malagasy, sns. Fantatry ny vahiny io fisainana io, hany ka hain’izy ireo tsara ny « milalao » ny Malagasy sy ny momba azy manontolo. Fivavahana, finoana, fomba, eny fa hatramin’ny vehivavy malagasy aza !Tranga faran’izay mahamenatra. Azo nosorohina tsara anefa raha nampahafantarina ny taranaka nifandimby fa « Velona ho Malagasy izy ary maty ho Malagasy » ! Ary azy manontolo i Madagasikara !HaRy RazafindrakotoL’article Fakafaka: be hambo ratsy ! a été récupéré chez Newsmada.